’बैशाख ’१ गते’ मात्रै फूल्ने यो फूलको यस्तो छ रहस्य ? – " सुलभ खबर "
राजा सलहेस कुनै दन्त्यकथाका पात्र होइनन्, न त यशस्वी राजर्षी नै हुन् । उनी त्यतिबेला राजा भए पनि लोककल्याणमा सक्रिय भएकाले जनताका प्रिय पात्र बनेको बताइन्छ । प्रेम, प्रकृति, सौर्य, न्याय र नेतृत्व सबै गुणमा उनी सबल मानिन्थे । सलहेसमात्र नभएर उनका सहयोगी पात्रहरू पनि देउताझैँ पुजिन्छन् ।पूर्वी नेपाल र उत्तरी विहार अर्थात् मिथिला क्षेत्र सलहेसको कर्मथलो रह्यो । मिथिलामा अन्याय, अत्याचार र अराजकता बढेको समयमा सलहेसको प्रादुर्भाव भएको थियो । उनलाई मिथिला क्षेत्रमा अन्याय र अत्याचारविरुद्ध लडेका विद्रोही पात्रका रूपमा समेत चिनिन्छ । उनलाई तराईको दुसाध समुदायले अहिले पनि भगवान्का रूपमा पूजा गर्ने गर्छन् ।इतिहास र संस्कृतिविद् डा. महादेव साह चाडबाड, संस्कृति र साँस्कृतिक महोत्सवमा दलित र गैरदलित भनेर विभाजनको रेखा हटाउने आन्दोलनको प्रादुर्भाव नै सलहेसले गरेको बताउनुहुन्छ ।
राजा सलहेसले दलित समुदायभन्दा माथि उठेर आफ्नो बसोबास गर्ने क्षेत्रका बासिन्दालाई बाहिरी आक्रमणबाट बचाए, यसबाट सबै समुदायलाई न्यायको प्रत्याभूति गराई पारम्परिक, पारस्परिक आधार बनाइदिएकाले उनी सबैका पुजनीय भएका हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सलहेस फूलबारीमा अन्तरजातीय विवाह पनि भइरहेकाले दलितमाथिको विभेद न्यूनीकरण भएको मान्न सकिन्छ ।’ विभेद अन्त्य गर्न राजा सलहेसको गाथासँग जोडिएको साँस्कृतिक चाडले बल पु¥याउने डा. साहको भनाइ छ । चौधौँ शताब्दीअघिको सलहेस गाथाको ऐतिहासिक कथामाथि अब चलचित्रसमेत निर्माण हुने भएको छ ।
वनस्पतिविज्ञलाई चुनौती वनस्पति विभागले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानअनुसार, मालिनीको मालाका रूपमा फुल्ने उक्त फूल ‘चाँदीगाभा सुनाखरी’ प्रजातिअन्तर्गत पर्छ, जुन एक हजार पाँच सय मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छ । तर, समुद्र सतहदेखि १११ किलोमिटर उचाइमा रहेको यस क्षेत्रमा फुल्ने गरेको उक्त फूल अपवादका रूपमा देखापरेको वनविज्ञको राय छ ।
डिभिजन वन कार्यालय सिरहा, लहानका सहायक वन अधिकृत अमरेन्द्रप्रसाद यादवले यस क्षेत्रमा त्यस्ता कुनै पनि रूखमा यसप्रकारको फूल फुलेको नदेखिएको बताउनुहुन्छ । ‘उचाइमा फुल्ने यो फूल कसरी यो रूखमा फुल्यो ? ठम्याउन सकिएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अपवादका रूपमा फुलेको यो फूलले दैवीय विश्वास आर्जन गरेको छ भन्ने कुरामा वैज्ञानिक ढङ्गबाट काट्न सक्ने स्थितिमा हामी छैनौँ ।
यसको काण्डबाट विभिन्न किसिमको शक्तिवद्र्धक र कोषीय अङ्गको वृद्धि हुने औषधि बनाइन्छन् ।यो दैवी चमत्कारलाई अहिलेसम्म भौतिकवादीहरूले चुनौती दिन सकेका छैनन् । नेपालमा जलवायु परिवर्तनले धरै वनस्पति लोप भएको र मौसमअनुसार नफुल्ने र नफल्ने दाबी भइरहेको अवस्थामा पनि सिरहाको यो रूखमा भने वैशाख १ गतेकै दिन फूल फुल्दै आएको छ ।
कृषि तथा वातावरणविज्ञ दिनेश यादवका अनुसार सुनाखरी फूल फुल्नुलाई धार्मिक विश्वासका रूपमा लिइन्छ । नेपालमा आठप्रकारका रैथाने सुनाखरी पाइन्छन् । उक्त फूलबारीमा पाइने फूल तराईमा पाइने ‘इरिया’ प्रजातिको सेतो सुनाखरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।फूलबारीमा देखिएको फूल ‘इटिफाइटिक’ स्वरूपको हो, जुन अरू रूखमा आश्रित रहन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फूलबारीमा फुलेको फूल पनि अरू रूखको काण्डमा देखिएको छ ।’ उहाँका अनुसार यो जातको फूल वसन्त ऋतुको चैत अन्तिममा फुलेर नओइलाइ १५ दिनसम्म रहन्छ ।
गर्भवती लिएर हिँडेको एम्बुलेन्सलाई बाघहरुले घेरेपछि एम्बुलेन्सभित्रै छोरीको जन्म
लकडाउन भएपछि मानिसहरु घरभित्रै भएपछि बाहिरी खुल्ला क्षेत्रमा जंगली जनावर स्वतन्त्र घुम्न थालेका छन् ।
काठमाण्डौ । घरमा असुरक्षित हुने भएको आजकल मानिसहरुले वहुमुल्य चिज बैंकको लकरमा राख्ने गरेका हुन्छन्